Mmemme P2P kacha mma maka gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
N'oge a, a na-amụghachi ha dị ka ụzọ dị mma nke isi zipu faịlụ n'ogologo anya. Netwọk P2P. Ha dị ọtụtụ ma dịgasị iche iche, mana oge a ka anyị ga-ekwu maka ngwa gam akporo.
Nke mbụ nke saịtị ndị a bụ orA nne, ndị Bit Torrent ahịa maka Windows na Mac na-aghọ họọrọ ọtụtụ ọrụ mgbe iju ke ndepụta nke nọ n'ọrụ sava emule. Lightdị ọkụ ya, ike ya na ọsọ ya na-eme ka ọ bụrụ ihe nzuzu, yana ewepụtara ya na usoro mara mma. Ozi nbudata ihe omuma a doro anya ma na enye ezi mmetụta nke ezigbo ọrụ. N'otu aka ahụ, µTorrent nwere ụdị ebugharị, nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime mmemme P2P zuru oke, ihe niile karịrị naanị 700k na ibu. Ọ bụrụ n ’anwa anwa ibudata mmemme a ngwa ngwa na ọkụ, ị kwesịrị ịma na ugbu a anyị na - ahụ ụdị ya bụ 3.1.26773 dị.
Ma mmemme ọzọ dị mma Vuze, nke a na-akpọbu Azureus, nke nwere ezigbo mma ma dịkwa oke ọsọ ma zie ezi na ịchọta faịlụ. Na mgbakwunye, usoro mmemme a mepere emepe nwere ndekọ DVD, ihe ọkpụkpọ HD na onye na-agụ RSS. A na-ewere Vuze dịka otu n'ime ngwaọrụ bittorent kachasị ike. Site a ngwa ọ dị mfe na ngwa ngwa chọọ, ibudata na kpọọ iyi faịlụ. Anyị bụ ndị dị ugbu a ya version 4.7.0.0.
Ọ bụrụ na enwere ihe ngosi mara mma na nke ewu ewu n'ezie, nke ahụ bụ Ares, P2P kachasị ebudatara na nke otu nde mmadụ họọrọ. Ares Ọ nwere nnukwu katalọgụ na-enye gị ohere ịhụchalụ faịlụ n'ihu nbudata ha kpamkpam. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ọkacha mmasị ndị ọrụ.
Ozi ndi ozo: Netwọk P2P Kedu ihe ha bụ?
Foto: Okwu Geek
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Mmemme P2P kacha mma maka gam akporo
Gabriel Pinzon dijo
Ha furu efu n'okporo ụzọ, Ares enweghị ụdị nke gam akporo, ngwa a na-akpọ Ares Plus, Ares Online na ihe ndị ọzọ sitere na ndị ọzọ ma ha enweghị njikọ na p2p ọ bụla ma ọ bụ usoro iyi. N'aka nke ọzọ, e nwere nsụgharị nke ndị ahịa bittorrent maka gam akporo: Frostwire.
Zaghachi Gabriel Pinzón